कति हो तपाईंको फेसबुक एकाउण्टको मूल्य ? जान्नुहोस् - जिस्ट खबर अर्थात यथार्थ खबर
कति हो तपाईंको फेसबुक एकाउण्टको मूल्य ? जान्नुहोस्
प्रकाशित मिति : शनिबार, अशोज ९, २०७२
सामाजिक संजालमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने भनेको फेसबुक हो अहिले । विश्वभरमा फेसबुकका दैनिक प्रयोगकर्तामात्रै एक अर्ब छन् भने यसका प्रयोगकर्ता डेढ अर्ब छन् । तर तपाईं हामीले प्रयोग गर्ने फेसुबक अकाउण्टको मूल्य जानको छौं त ?
सोसल नेटवर्किङ जायन्ट फेसबुकको यस वर्षको विज्ञापन रेभेन्यूका अनुसार एक फेसबुक अकाउण्टको मूल्य करिब १३ सय रुपैयाँ (१३ डलर) पर्न आउँछ । रिसर्च फर्म ईमार्केटरका अनुसार संसारभरबाट प्रयोगकर्ताको औसत निकाल्ने हो भने फेसबुकको १२.७६ डरलको एड रेभेन्यू निस्कन्छ । फेसबुकले अमेरिकाबाट प्रत्येक प्रयोगकर्ताबाट ४८.७६ डलर कमाउँछ ।
सिनेटमा छापिएको रिपोर्ट अनुसार फर्मको अनुमानलाई आधार मान्ने हो सन २०१५ मा फेसबुकले विज्ञापनको ६५ प्रतिशत कब्जा गरेको छ । यो वर्ष फेसबुकको संसारभरबाट १६ सय ३० करोड डलरको एड रेभेन्यू कमाउने आशा गरिएको छ । गत वर्ष यो ११ सय ५० थियो । यसको मतलब गत वर्षको तुलनामा फेसबुकले ४१ प्रतिशत बढी कमाउने छ ।
उल्लखित रिपोर्ट फेसबुकर र फोटो सेयरिङ एप ईन्स्टाग्रामको लागि प्रोजेक्ट गरिएको एड रेभेन्यूको आधारमा तयार पारिएको हो । ईन्स्टाग्रामले यो वर्ष ६० करोड डलर कमाउने आँकलन गरिएको छ, यो फेसबुकको कूल एड रेभेन्यूको ५ प्रतिशत हो ।